Jabuuti Miyaynu Collownay? Aragtida Shacabka iyo Xukuumada. Qalinkii Dr Xoog. |
Jabuuti Miyaynu Collownay? Aragtida Shacabka iyo Xukuumada. Qalinkii Dr Xoog.
Waxa maalmahanba aynu arkaynay dareen cadho leh oo ka muuqday shacabka reer Soomaaliland, kaas oo ka dhashay, siday sheegeen, hab-maamuus hooseeya oo uu kala kulmay Madaxweynahoodu xafladdii caleemo saarka ee Madaxweynaha Jabuuti oo lagu marti qaaday, iyadoo qaarkood is-xejin kari waayeen oo ay cabbireenba cadhadooda. Dadkaa waxa ka mid ahaa masuuliyiin dawladeed, siyaasiyiin, aqoonyahanno, hogaamiye dhaqameed iyo dad kaleba.
Haddaba heshiisyada iyo khilaafyada ka dhex dhaca dawladaha waxa bilaaba masuuliyiinta labada dal markaasaa shacabkuna ku raacaa shar iyo khayrba. Ma dhacdo laba shacab oo colaadi dhex martaa iyagoon dawladahoodu colloobin oonay xidhiidhkii dublamaasiyadeed isu jarin ama saaxiibtinimo dhex martaa iyadoo dawladahoodu col yihiin.
Markaan daba galay hab-maamuuskii loo sameeyey Madaxweynaha Soomaaliland, waxan arkay in bilowgii qaabilaad iyo hab-maamuus fiican loo sameeyey, laakiin aan lagu soo dhoweyn qolkii sugitaanka Madaxweynayaasha ee Madaxweynaha Jabuuti ku qaabilayey Madaxweynayaasha, ka hor intaan munaasibadda caleemo-saarku bilaabmin, hasa yeeshee inta Madaxweynuhu u soo baxay oo salaamay ka dibna u tilmaamay in la fadhiisiyo goobtii martida ee hab-maamuuska dhexe. Ka dib waxa dhacday in Madaxweynayaashii ka soo baxeen qolkii sugitaanka una soo baxeen goobtii xafladda isagoo Ismaaciil Cumar Geellana la socda, ka dib waxa istaagay dhammaan martidii fadhiday goobta caleemo-saarka oo uu ka mid ahaa Madaxweynaheennu iyagoo u sacab tumaya Madaxweynayaashii soo galayey oo uu dabcan ka mid ahaa Madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweyne Silaanyo muu ku khasbanayn in uu yeelo meeshaa la fadhiisiyey hadduuse fadhiistay wuu ku khasbanaa in uu istaago waayo dadweynihii oo wada kacay sii fadhigiisu wuxu noqonayaa foolxumo, waxaanuse ku khasbanayn sacab tunka inkastoo falalka qaarkood u dhacaan si kedis ah ama farkanax ah oon loo qasdiyin.
Reer Soomaaliland yaanu u muuqan Madaxweyne Xasan Shiikha Soomaaliya ee la socday Madaxweynayaashii laysu taagay ee loo sacab-tumayey, waana inta qudha ee uu haysto Xasan Shiikh waxana ka maqan intaas oo nimco iyo guulo ah oo Madaxweynaha iyo shacbiga Soomaaliland haystaan
Haddaba ismaandhaafka dawladuhu wuxuu u dhici karaa saddex siyood:
Ismaan-dhaaf gaadhsiiya in xidhiidhka dublamaasiyadeed la kala goosto taas oo keenta in labada dal iyo labada shacab colloobaan, taas oo keeni karta dagaal afka ah, mararka qaarkoodna isku-dhac ciidan marka labada dal ay xuduud wadaagaan.
Ismaan-dhaaf heer dhexe ah oo safiirrada loo yeedho, taas oo tilmaamaysa in arrintu mudan tahay in labada dal ka heshiiyaan arrinta ismaan-dhaafka keentay, laakiin aan gaadhsiisnayn in dagaal afka ah la is dhaafsado.
Tabasho aan gaadhsiisnayn labadaa heer laakiin dawladuhu yareeyaan isu socodka madaxdooda sare sida madaxweynayaasha, taas oon shacabka saamayn ku yeelan ama aanay dareemin. Taas oo ama laga heshiiyo ama korba u sii kici karta oo u tallaabi karta labada qodob ee sare.
Anigu waxan is leeyahay hadday dawladdeennu wax qoonsatay waa tan u dambaysa ee tabashada ah ee u baahan is laab xaadhasho iyo wadahadal madaxda sare ee labada qaran waayo arrintan aynu dhex dabbaalanay weli madaxda ay khusaysaa kama hadal sida madaxtooyada iyo wasaaradda arrimaha dibadda amaba warfaafinta. Markaa waxaynu galnay dagaal aan dawladdeenu ku jirin, waana calaamad muujinaysa kala danbayn la’aan.
Haddaba dawladdeenuna laba mid haynoo caddayso:
In dawladdeennu dagaalkaa afka ah iyo xidhiidhkaa xun ee shacabkeedu bilaabay ay ogoshahay lana wadaagto dareenkaa cadhada leh ee shacabkeeda iyo madaxdeeda badhkood qabo, inkastoo ay daahday oo ay u muuqanayso in shacabku hagayo xidhiidhada Soomaaliland iyo dawladaha.
In ay xaal ka bixiso aflagaadada madaxdeeda iyo shacabkeedu wado waxa danbana la joojiyo hadday tabasho hoose jirtana labada dawladood ka wada hadlaan.
Dalka Jabuuti waa dal aynu walaalo iyo jaarba nahay, waxa innaga dhexeeya xidhiidh dhaqan, dhalasho, siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba, ma nihin laba dad iyo laba dal oo kala maarmi kara, wax kastoo dhacana waa in wada hadal aynu ku dhammaysano.
Madaxdeenna ayay la taalay taladu, iyagay ahayd in ay sii ogaadaan sida loo qaabilayo oo ama ku galaan ama ka cudur-daartaan. Midna aynu xasuusnaanno, ma nihin dal dunidu ictiraaftay, inta ictiraafku maqan yahayna ma helayso madaxdeennu hab-maamuuska ay istaahisho marar badan, sida tan maanta dhacday oo kale oo aan isleeyahay Ismaaciil Cumar Geelle waxbaa khasbaayey isagoon innaga iyo Madaxweynaheenna toona nebcayn ee inna jecel. Marar badan oo madaxweynaheennu booqday Jabuuti si fiican oo heer sare ah ayaa loo qaabilay, laakiin marka madaxweynayaasha la ictiraafsanyahay isu yimaaddaan waxbaa is bedelaya waana waxa Jabuuti khasbay. Haddaba geel nabar uu ogyahay kama gagabee aan ogaanno madax iyo shacabba in maamuuska sare iyo ictiraafku isku xidhan yihiin, waana taynu halganka dheer ugu jirnay uguna jirno weli, waanay iman doontaa maalintaynu sugeyney weliba si dhakhso ah haddii Eebbe idmo, waana in aanay hanwaynideenna wax u dhimin qodaxi meesheede. Heesihii halgankii xoraynta ayaa waxa ka mid ahaa
WALLEE DHAXAAD SABIRTAYE HA SUGI WAAYINE WAKHTIGA
SAMAHA GUUSHIYO XORNIMO WALLE SANDULAAD KU HELI
Reer Soomaaliland dawlad iyo shacabba waxay marar badan ku hadlaan waxaanay ka fiirsan oo yasid iyo aflagaaddo ah oy dad kale oo walaalaheena ka sheegaan sida ma galmudug baan meel la fadhiistaa? Taa miyaanay ka habboonayn anigu halkan fadhiisan maayo ama shirkan ka qayb geli maayo iyagoon cidna magacaabin?
Qalinkii Dr. Xuseen Muxumed Maxamed (Xuseen Xoog)